Lammaane la argagaxay soo-galooti kusoo dhex dhuuntay gaarigooda. | Radio Himilo
Home / Macluumaad / Lammaane la argagaxay soo-galooti kusoo dhex dhuuntay gaarigooda.
Muqdisho – Nin ku nool dalka UK ayaa sheegay inuusan hadda kahor waligiis arkin afadiisa oo la yaab awgiis suniyaha la taagtaagaysa markii ay ogaadeen in nin soo-galooti ah uu kusoo dhex dhuuntay gaarigooda.
Lammaanaha Wales ayaa dalxiis afar maalmood ah kaga yimid dalka Faransiiska markii falkani uu dhacay.
59-jirka lagu magacaabo Paul Edmunds wuxuu sheegay inuu gaarigiisa kasoo bixinayay alaabta ugu jirta markii uu arkay dhar aysan lahayn. Wax yar kadibna wuxuu ogaaday in qof uu ku jiro alaabaha gadaashooda.
Edmunds wuxuu sheegay inuusan fikir ka heysan goorta iyo sida ninkani kusoo dhuuntay gaarigooda ay ku dhacday.
Wuxuuse tibaaxay in ninkani uu ka faa’iideystay mar xarunta ajab ay ka qaadanayeen shidaalka gudaha dalka Faransiiska.
Intaas kadib lammaanaha ayaa soo galay safar qaadanayay 4 saac iyo bar. Edmunds wuxuu sheegay in 22-jirkan soo-galootiga kaas oo aan si fiican ugu hadli karin Ingiriiska uu weydiiyay haddii ay joogaan England iyo in kale. Waxayna u sheegeen inay joogaan Wales.
Markii ay su’aaleen halka uu ka yimid, wuxuu ugu jawaabay: ‘Afrika.”
Soo-galootigani wuxuu sitay moobil, wuxuuna isku dayayay inuu la xiriiro dad u jooga gudaha England.
Edmunds wuxuu ugu yeeray booliska – isaga oo biyo iyo shukulaatana siiyay kahor inta aysan imaanin.
Previous: Hooyo faqri awgiis carruurteeda u dilaysa.